Kusukela ngaleso sikhathi, njengoba "jeans" ezimnandi zakudala eziphendulwa umoya zaqala ukusetshenziswa kwabo kwansuku zonke, Indwangu isibe impahla ethandwa kakhulu ezihlukahlukene mhlawumbe izinhlobo izingubo. nezimfashini Ukushintsha nezitayela, kodwa abantu bahlale bemazi elula jackets kanye shirts, amabhulukwe amafushane, uwumnikazi wenkampani futhi iziketi ezenziwe jini ngisho izingubo.
Futhi emsebenzini ezokungcebeleka
Denim ingubo - into Irreplaceable ikhabethe, okuyinto amandla futhi jikelele. Ziyakwazi amantombazane omkhulu futhi usemncane kakhulu futhi izintokazi abadala. Njalo stylish, eziqinile futhi iqine, lezi izingubo kuyoba efanele e kwezimo ezihluke kakhulu. Futhi omunye jini plus - leli kuyigama wesibili jini - kuwo kahle ngokufanayo futhi kahle futhi shapely nebafati omkhulu, ebukeka kahle. Indwangu Okuwugqinsi efihla sibalo amaphutha, futhi akhethiwe kahle isitayela nombala uguqule jini ingubo izambatho ukhululekile kakhulu, qinani ukukhanga zonyaka eziningi.
ingubo Ngokuthakazelisayo jeans - a Convertible kweqiniso. Uma esokuba ibhizinisi cut, kuyafaneleka ukuba avele ehhovisi, esikhungweni sina. Kodwa kubalulekile ukuba alulaze kobukhulu touch of romance, wezwakalisa i ngobudedengu lula, ukuhlehlisa izinkinobho phezulu esangweni, ukugqoka ubuhlalu kukhanya noma amaketanga ukuze ubophela isikhafu ezimibalabala noma u-cravat, futhi uthole isithombe esisha yowesifazane yesimanje, unfettered, ngokugqamile, beqiniseka. Ngaphandle ingubo, naphezu izicubu engalolongekile Ungabheka sexy kakhulu futhi njengabesifazane. A izesekeli elihambisana uyokhulisa aura ezikhangayo.
Denim ubukeka cool nge izakhi okuhlobisa eyenziwe lesikhumba, metal inclusions, okuyinto anganikeza Uhlobo esinomdlandla, qina, nolaka. izingubo ezinjalo ezinkulu kufanelekile izintokazi - abathandi isitayela "Vamp". Denim ingubo lace ifaka, efekethisiwe, appliques, sequins, rhinestones, sequins isithombe ukwesekwa emide emincane eminingana, ethambile, ngisho effeminate. Nokho, bobabili kuyohlale esiqongweni ukuthandwa funa.
Ngenxa jini ukukhiqiza ezihlukahlukene ukwakheka, igqoka ithungwe kuwo yezinkathi ezithile yesikhashana. Okuningi obukhulu, indwangu efudumele kuziwa imikhiqizo kwesikhathi ekwindla-ubusika. mncane Okuningi nokukhanya - I-sarafan entwasahlobo-ihlobo, ingubo, ingubo. ukotini wemvelo, oyingxenye ye jeans, ivumela isikhumba ukuphefumula futhi kuvimbela okweqile kanye ukujuluka ngokweqile. Ngakho-ke, i-denim igqoka ngeke baphumelele ukushisa okukhulu.
Izingubo jini amasudi zonke izikhathi. Ngisho ekhaya ngubo, libukeke, uma kuyintando jini, futhi le ngubo akanamahloni ukuvela phambi izivakashi. I abayithandayo kwale nto kweqiniso baye badlulela ngisho nakakhulu futhi onesibindi ukugqoka ingubo yomshado jeans kakhulu! Kwakuyisinyathelo ngokugqamile, ewaphula wonke canons kanye namasiko. Nokho, angizisoli, ngoba umklami athuthukiswe futhi mhla imodeli emakethe original ngempela, engavamile futhi emuhle kakhulu! Denim wedding izingubo, izithombe zazo kwaqala ukuvela emakhasini izincwadi ezifanele, okubangelwa isiphepho kwenzalo kwabangela isasasa elikhulu. Phakathi Hollywood glitterati amacala lapho imibhangqwana sebeshade ngokomthetho wahlala emcimbini wedding kabusha wahlela ukuba "umakoti" kungenzeka avele ukukhanya, begqoke 'zonke ukufutheka ".
Ukugqoka of jini
Yiziphi izinhlobo netindlela jini igqoka esingazithola amafasitela ezitolo futhi boutiques? Yini esenza sibone umkhakha we umkhakha ukukhanya?
Summer sundresses ngomkhala futhi ngaphandle, lwavutha futhi Imi ngqo - ladies eziyisikhombisa ezimathambo futhi hhayi kakhulu.
Izibuko ngabesifazane "ezithakazelisayo" isikhundla nge A ezimise-ngalé. Basuke enhle ukufihla lwesisu futhi ukuba bagcine ukubonakala abahloniphekile imfashini ngisho esontweni eledlule kwethemu.
Ukuze ubuhle eside ezinemilenze abafuna ukubukisa izintelezi zabo, kuyoba isibusiso sangempela ingubo emfushane nge isiketi ngqo noma ngokugcwele.
Okubizwa ngokuthi ingubo-wallets, ngakolunye uhlangothi, siyobe senza kahle nge ezinye amaphutha sibalo, ngakolunye - uyonika isici imfihlakalo nozungu. Owesilisa zikhiphe lezi zintokazi nhla, udwebe umcabango lokho efihla ngemuva Imi ngamabomu ungenalutho.
Dress-shirt - kukho olukhulu izingubo abayitoho, ukhululekile, esiwusizo, nenhle.
Safari ingubo - kunzima ukuthola izingubo bekhululeke kakhudlwana uvakashe, ngezamabhizinisi.
ongakhetha Holiday - izingubo nge corsets, bustiers, ruffles lace. Ziyakwazi ezinhle emcimbini, gala izenzakalo, amaqembu wokuziphilisa.
A amabhuzu okusezingeni eliphezulu eyenziwe lesikhumba noma jeans efanayo, imodeli izicathulo, nezimbadada heeled, izicathulo ezemidlalo kuzosiza ephelele isithombe ukhethe ukudala.
Universal American - ijezi esisebenzayo izingubo besifazane
Indlela ukucacisa isigaba umshayeli ukuze umshwalense?